आफै मागी मागी छोरोको बिहे ! विद्युत् निर्यात गर्दै नेपाल - Bhaktapur Radio
गृहपृष्ठ › विचार › आफै मागी मागी छोरोको बिहे ! विद्युत् निर्यात गर्दै नेपाल
काठमाडौं, १७ कार्तिक । आफै ऊर्जा अभावले थला परेको नेपालले भारतीय ऊर्जा बजारमा ‘पैतिस्पर्धी दर’ मा विद्युत् व्यापारका लागि अनुमति पाएको छ ।
पहिलो चरणमा प्राधिकरणको स्वामित्वमा नुवाकोटमा सञ्चालनमा रहेको २४ मेगावटको त्रिशुली र १५ मेगावटको देवीघाट विद्युत्बाट उत्पादित ३९ मेगावट विद्युत् भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइआइएक्स) मा बिक्री गनं अनुमति दिइएको हो ।
दुई विद्युत्गृहबाट उत्पादित विद्युत्लाई स्रोत मानी भारतीय बजारमा बिक्रीका लागि अनुमति दिइएको छ । प्राधिकरणले आज राति १२ बजेबाट ढल्केबर–मजुफ्फपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमार्फत विद्युत् निर्यात सुरु गर्नेछ । हाल यो लाइनबाट विद्युत् आयातमात्र भइरहेको छ ।
नेपालले भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइआइएक्स) मा विद्युत् खरिद गरी आयात गर्न यसअघि नै अनुमति पाइसकेका छ । प्राधिकरणले गत १७ वैशाखबाट आवश्यक परेको बेला आइआइएक्समार्फत् प्रतिस्पर्धा दरमा विद्युत् आयात गर्दै आएको हो । निर्यातको अनुमति पाएसँग नेपाल र भारतबीचको विद्युत् व्यापार नयाँ चुरणमा प्रवेश गरेको छ ।
भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्रणालीअन्तर्गत दैनिक विद्युत् बजार (डे अहेड मार्केट) मा नेपालले विद्युत् बिक्री गर्नेछ । प्राधिकरणले हरेक दिन बिहान १० बजेदेखि मध्याह्न १२ बजेसम्म एक्सचेन्ज बजारमा बिक्री गरिने विद्युत्को परिमाणसहित बिडमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
विद्युत् प्रणालीमार्फत तय हुने ‘मार्केट क्लियरिङ प्राइस’ का आधारमा विद्युत्को प्रतियुनिट बिक्री दर तय हुनेछ । प्रतिस्पर्धा दर तय भएपछि रातिको १२ बजेदेखि अर्काे दिनको रातको १२ बजेसम्म अर्थात् २४ घण्टा विद्युत् निर्यात हुनेछ । भारतमा कोइलाको मूल्य बढुदा एक्सचेन्ज मार्केटमा प्रतियुनिट विद्युत्को मूल्य २८ भारतीय रुपैयाँ भारु सम्म पुगेको थियो ।
प्राधिकरणको तर्फबाट एक्सचेन्ज बजारको सम्पूर्ण कारोबार नेपालसँगको विद्युत् व्यापारका लागि तोकिएको सम्पर्क निकाय एनटीपीसी विद्युत् व्यापार नियम (एनभीभीएन) ले गर्नेछ । एनभीभीएनले हरेक दिनको कारोबरसम्बन्धी विवरण प्रत्येक दिन साँझ ६ बजे प्राधिकरणलाई पठाउनेछ ।